ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်သော ခြေထောက်အနာ ဆိုတာဘာလဲ – WunYan
ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်သော ခြေထောက်အနာ ဆိုတာဘာလဲ
ဆီးချိုရှိသူတွေဟာ အမျိုးမျိုးသော ခြေထောက်အနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြသနာပေါင်းစုံ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာ သေးသေးကနေ ပိုဆိုးလာကာ ဆိုးရွားတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေဆီကို ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်အနာတွေဟာ ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ neuropathy လို့ခေါ်တဲ့ အာရုံကြောထိခိုက်မှုခံစားရတဲ့အခါ အများဆုံး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အမှန်မှာတော့ ဒီအနာတွေဟာ နာကျင်ပေမယ့် အာရုံကြောတွေ ထိခိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်ရဲ့နာမှု၊အေးမှု၊ ပူမှုစတာတွေကို ခံစားနိုင်စွမ်းလျော့နည်းလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားမှုမသိတော့ခြင်းဆိုတာ သင့်ခြေထောက်မှာ ဒဏ်ရာရနေတာကို မသိတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်ဖိနပ်မှာဝင်နေတဲ့ ခဲလုံး၊ သံမှိုစတာတွေကို မခံစားမိပဲ ဒီဖိနပ်နဲ့ပဲ တစ်နေ့လုံး လျှောက်သွားနေမိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ခြေထောက်မှာ အရည်ကြည်ဖုဖြစ်လာရင်တောင် သင်ခံစားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ခြေထောက်အရေပြား ပေါက်ပြဲပြီး ပိုးဝင်သည်ထိ သင်သတိမထားမိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ခြေဖဝါးတွေ ခြေချောင်းတွေ ပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ထိလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်အနာ ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
ဆီးချိုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်အနာတွေဟာ အားနည်း ထုံကျင်ပြီး ပူတဲ့ စူးတဲ့ နာကျင်မှုကို ခံစားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခြေထောက်မှာ ခံစားမှုပျောက်ဆုံး နေတတ်ပြီး ဒဏ်ရာရလွယ်ကာ ရလျှင်လည်း မသိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သွေးလှည့်ပတ်မှု မကောင်းခြင်းနဲ့ ခြေထောက်၊ခြေချောင်းတွေရဲ့ ပုံစံပြောင်းလဲလာခြင်းကလည်း ပြသနာတွေများစွာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကုသမှုအပိုင်းဟာ သင်ဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်ပြသနာ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဥပမာ- အသားမာတက်နေတယ်ဆိုရင် ပေါ့ပါးအဆင်ပြေတဲ့ ရှူးဖိနပ်ကို ပြောင်းလဲဝတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီး အနည်းငယ်ပိုးဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး၊ မှိုသတ်ဆေးတွေနဲ့ ကုသရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားပြသနာတွေမှာဆိုရင် ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးသောက်ခြင်းတွေ တောင် လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။ အသားပုပ်ခြင်း (သို့) အသားမျှင်များသေခြင်း ဟာဆိုရင် ပြန်ကောင်းလာအောင် လုပ်ပေးလို့ မရတော့ပါဘူး။
သို့သော် ခြောက်သွေ့တဲ့ အနာအမျိုးအစားကြောင့် ပုပ်သွားတဲ့ အသားတွေကို ပိုးဝင်ပြီး ဆက် မပြန့်ဖို့ရာ ကာကွယ်ကုသရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ပိုးဆက်ဝင်လာပါက အနာဟာ စိုတဲ့ အမျိုးအစားကို ပြောင်းပြီး ပုပ်တာ ပိုဆိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုပ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ခြင်းဟာ အမှန်တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီပုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကနေ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပိုးဝင်ခြင်း တွေ ဆက်မဖြစ်အောင် ပိုးသတ်ဆေးတွေသုံးပြီး ကာကွယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့ ခြေထောက်ပုပ်ခြင်းတွေမှာဆိုရင် ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းကို ဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းထိတောင် လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုကြောင့် အာရုံကြောထိခိုက်ထားတဲ့ လူနာတွေဟာ သူတို့ခြေထောက်ကို အရမ်းဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခြေထောက်ကိုသွားတဲ့ အာရုံကြောဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီး ထိခိုက် မှုအများဆုံးခံရတဲ့ အာရုံကြောဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်မှာရှိတဲ့ အာရုံခံနိုင်စွမ်း ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာ ဒဏ်ရာရရင် မသိပဲ အနာဖြစ်ပြီး ပိုးဝင်လာခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
ခြေထောက်သွေးလှည့်ပတ်မှု မကောင်းရင်လည်း ခြေထောက်အနာဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများစေပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ခြေထောက်အနာ ပြသနာတွေနဲ့ ခြေထောက်ဖြတ်ရခြင်းကို အခွင့်အလမ်း ပိုများစေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ပေးသူက သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်အောင် လုပ်ရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ခြေထောက်ကျန်းမာရေးတွက် ဂရုစိုက်ပေးရမယ့် အရာတွေကတော့-
• မပူလွန်းတဲ့ ရေနွေးနွေးနဲ့ ဆပ်ပြာအပျော့စားကို သုံးပြီး နေ့စဉ် ခြေထောက်ကို ဆေးကြောပါ။ ခြေထောက်ရေစိမ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ တဘက်နုနုတစ်ထည်ကိုသုံးပြီး ခြေထောက်နဲ့ ခြေချောင်းကြားတွေကို ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။
• နေ့တိုင်း ခြေထောက် နဲ့ ခြေချောင်းတွေမှာ ပြတ်ရှရာ၊ အရည်ကြည်ဖု၊ နီမြန်းရာ၊ အဖုအဖောင်းများ၊ အရိုးကျိုးခြင်းနဲ့ အခြားပြသနာတွေ ရှိမရှိ ကိုအမြဲကြည့်ရှု စစ်ဆေးပါ။ မှန်ကို လက်မှာကိုင်ပြီး (သို့) အောက်ချပြီး ခြေဖဝါး တွေကို စစ်ဆေးပါ။ အခြားသူတစ်ယောက်အကူအညီနဲ့လည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလာရင် သင့်အုပ်ထိန်းသူက အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
• ခြေထောက်ကို အမြဲဂရုစိုက်နေရတဲ့ လူနာတွေဟာ podiatrist လို့ခေါ်တဲ့ ခြေထောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသပေးတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ချိန်းဆို ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာ အောက်ပါတို့ကို ခံစားလာရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသသင့်ပါတယ်။
• သင့်ခြေထောက်အရေပြားဟာ ပေါက်ပြဲတယ် (သို့) အရည်ထွက်လာတယ်ဆိုတာ သတိထားမိမယ်
• ခြေထောက်အရေပြားရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (သို့) အားလုံးဟာ အရောင်ပြောင်းလာပြီး ပို၍နီလာ၊ ပြာလာ၊ ဖျော့လာ၊ ရင့်လာ စသဖြင့် ဖြစ်လာမယ်
• သင့်ခြေထောက်မှာရှိတဲ့ အရည်ကြည်ဖု နေရာ၊ ဒဏ်ရာနေရာတွေမှာ အလုံးတွေ ပိုထွက်လာမယ် ဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းပြသရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြေထောက်မှာ ဆီးချိုအနာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုရှောင်ကြဉ်ရမလဲ?
ဆီးချိုရောဂါကို ထိန်းထားရမယ့်အပြင် အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး သင့်ခြေထောက်တွေကို ဂရုစိုက်ပေးရပါမယ်။
• သက်တောင့်သက်တာ ရှိပြီး ခြေထောက်အုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်ကို အချိန်တိုင်းဝတ်ပါ။ တကယ်လို့ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ခြေထောက်ရောင်သူတွေ၊ ခြေထောက်အနေအထား မူမမှန်သူတွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ အထူးဖိနပ်တွေလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ခြေထောက်ကို ဒဏ်ရာရစေမယ့် ပစ္စည်းတွေ ဖိနပ်ထဲဝင်နေလားဆိုတာ သေချာစစ်ဆေးပါ။
• အိမ်ထဲတွင်တောင် ဖိနပ်မပါပဲ လမ်းမလျှောက်ပါနဲ့။ နွေရာသီရောက်တဲ့အခါ အရမ်းပူလွန်းတဲ့ ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်ကနေ လမ်းမလျှောက်ပါနဲ့။
• သင့်ခြေထောက်ကို ရေနွေးဖြင့်သာ အမြဲဆေးကြောပြီး ခြောက်အောင် သုတ်ပါ။
• သင့်ခြေထောက်မှာ အနာရှိလား၊ ဘာပြသနာရှိလဲဆိုတာ နေ့စဉ်စစ်ဆေးပါ။
• အထူးသဖြင့် ခြေဖနောင့်တွေလိုမျိုး ခြောက်တဲ့နေရာတွေကို လိုးရှင်း လိမ်းပေးပါ။ ခြေချောင်းတွေကြားကိုတော့ မလိမ်းပါနဲ့။ အသားမာတွေကို ရေမြုပ်ကျောက်လေးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ချောမွေ့အောင် ပွတ်ပါ။ ကတ်ကြေး၊ ဓား စတာတွေမသုံးပါနဲ့။
• ခြေသည်းညှပ်တဲ့အခါ တည့်တည့်သာညှပ်ပြီး ထောင့်တွေကို တိုအောင် မညှပ်ပစ်ပါနဲ့။
• သင့်ဆရာဝန်က ခြေထောက်ကျန်းမာရေးကို နေ့စဉ်စစ်ဆေးပါစေ။
• ဆေးလိပ်သောက်ပါက ဖြတ်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက သွေးကြောကျဉ်းခြင်းနဲ့ ခြေထောက်သွေးလှည့်ပတ်မှု မကောင်းမွန်ခြင်းကို ဖြစ်နိုင်ခြေ ထပ်များစေပါတယ်။
ဆီးခြိုကွောငျ့ဖွဈသော ခွထေောကျအနာ ဆိုတာဘာလဲ
အမှနျမှာတော့ ဒီအနာတှဟော နာကငျြပမေယျ့ အာရုံကွောတှေ ထိခိုကျထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ သငျ့ရဲ့နာမှု၊အေးမှု၊ ပူမှုစတာတှကေို ခံစားနိုငျစှမျးလြော့နညျးလာတာ ဖွဈပါတယျ။ ခံစားမှုမသိတော့ခွငျးဆိုတာ သငျ့ခွထေောကျမှာ ဒဏျရာရနတောကို မသိတာဖွဈပါတယျ။ သငျဟာ သငျ့ဖိနပျမှာဝငျနတေဲ့ ခဲလုံး၊ သံမှိုစတာတှကေို မခံစားမိပဲ ဒီဖိနပျနဲ့ပဲ တဈနလေုံ့း လြှောကျသှားနမေိနိုငျပါတယျ။ သငျ့ခွထေောကျမှာ အရညျကွညျဖုဖွဈလာရငျတောငျ သငျခံစားမိမှာမဟုတျပါဘူး။ သငျ့ခွထေောကျအရပွေား ပေါကျပွဲပွီး ပိုးဝငျသညျထိ သငျသတိမထားမိတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဆီးခြိုကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ခွထေောကျအနာ ရဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေ ဘာတှလေဲ။
ကုသမှုအပိုငျးဟာ သငျဖွဈတဲ့ ခွထေောကျပွသနာ အမြိုးအစားပျေါ မူတညျပါတယျ။ ဥပမာ- အသားမာတကျနတေယျဆိုရငျ ပေါ့ပါးအဆငျပွတေဲ့ ရှူးဖိနပျကို ပွောငျးလဲဝတျပေးဖို့လိုအပျပွီး အနညျးငယျပိုးဝငျနတေယျဆိုရငျတော့ ပဋိဇီဝပိုးသတျဆေး၊ မှိုသတျဆေးတှနေဲ့ ကုသရမှာ ဖွဈပါတယျ။ တခွားပွသနာတှမှောဆိုရငျ ခှဲစိတျဖယျရှားခွငျးနဲ့ ပိုးသတျဆေးသောကျခွငျးတှေ တောငျ လိုအပျလာနိုငျပါတယျ။ အသားပုပျခွငျး (သို့) အသားမြှငျမြားသခွေငျး ဟာဆိုရငျ ပွနျကောငျးလာအောငျ လုပျပေးလို့ မရတော့ပါဘူး။
သို့သျော ခွောကျသှတေဲ့ အနာအမြိုးအစားကွောငျ့ ပုပျသှားတဲ့ အသားတှကေို ပိုးဝငျပွီး ဆကျ မပွနျ့ဖို့ရာ ကာကှယျကုသရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမဟုတျပဲ ပိုးဆကျဝငျလာပါက အနာဟာ စိုတဲ့ အမြိုးအစားကို ပွောငျးပွီး ပုပျတာ ပိုဆိုးလာမှာဖွဈပါတယျ။ ပုပျသှားတဲ့အပိုငျးတှကေို ခှဲစိတျဖယျရှားပဈလိုကျခွငျးဟာ အမှနျတကယျကို လိုအပျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒီပုပျနတေဲ့အပိုငျးတှကေနေ အန်တရာယျရှိတဲ့ပိုးဝငျခွငျး တှေ ဆကျမဖွဈအောငျ ပိုးသတျဆေးတှသေုံးပွီး ကာကှယျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အရမျးဆိုးဝါးတဲ့ ခွထေောကျပုပျခွငျးတှမှောဆိုရငျ ဖွဈနတေဲ့အပိုငျးကို ဖွတျတောကျလိုကျခွငျးထိတောငျ လိုအပျလာနိုငျပါတယျ။
ဆီးခြိုကွောငျ့ အာရုံကွောထိခိုကျထားတဲ့ လူနာတှဟော သူတို့ခွထေောကျကို အရမျးဂရုစိုကျဖို့ လိုပါတယျ။ ခွထေောကျကိုသှားတဲ့ အာရုံကွောဟာ ခန်ဓာကိုယျမှာ အရှညျဆုံးဖွဈပွီး ထိခိုကျ မှုအမြားဆုံးခံရတဲ့ အာရုံကွောဖွဈပါတယျ။ ခွထေောကျမှာရှိတဲ့ အာရုံခံနိုငျစှမျး ဆုံးရှုံးသှားတယျဆိုတာ ဒဏျရာရရငျ မသိပဲ အနာဖွဈပွီး ပိုးဝငျလာခွငျးကို ဆိုလိုပါတယျ။
ခွထေောကျသှေးလှညျ့ပတျမှု မကောငျးရငျလညျး ခွထေောကျအနာဖွဈဖို့ အခှငျ့အလမျးမြားစပေါတယျ။ ဆေးလိပျသောကျခွငျးဟာ ခွထေောကျအနာ ပွသနာတှနေဲ့ ခွထေောကျဖွတျရခွငျးကို အခှငျ့အလမျး ပိုမြားစပေါတယျ။ ကနျြးမာရေးဝနျဆောငျ စောငျ့ရှောကျပေးသူက သငျဆေးလိပျဖွတျအောငျ လုပျရာမှာ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
ခွထေောကျမှာ ဆီးခြိုအနာမဖွဈအောငျ ဘယျလိုရှောငျကွဉျရမလဲ?
ဆီးခြိုရောဂါကို ထိနျးထားရမယျ့အပွငျ အောကျပါတို့ကို လိုကျနာဆောငျရှကျပွီး သငျ့ခွထေောကျတှကေို ဂရုစိုကျပေးရပါမယျ။
• သကျတောငျ့သကျတာ ရှိပွီး ခွထေောကျအုပျထားတဲ့ ဖိနပျကို အခြိနျတိုငျးဝတျပါ။ တကယျလို့ လိုအပျမယျဆိုရငျ ခွထေောကျရောငျသူတှေ၊ ခွထေောကျအနအေထား မူမမှနျသူတှအေတှကျ ထုတျထားတဲ့ အထူးဖိနပျတှလေညျး ရနိုငျပါတယျ။ သငျ့ခွထေောကျကို ဒဏျရာရစမေယျ့ ပစ်စညျးတှေ ဖိနပျထဲဝငျနလေားဆိုတာ သခြောစဈဆေးပါ။
• အိမျထဲတှငျတောငျ ဖိနပျမပါပဲ လမျးမလြှောကျပါနဲ့။ နှရောသီရောကျတဲ့အခါ အရမျးပူလှနျးတဲ့ ပလကျဖောငျးတှပေျေါကနေ လမျးမလြှောကျပါနဲ့။
• သငျ့ခွထေောကျကို ရနှေေးဖွငျ့သာ အမွဲဆေးကွောပွီး ခွောကျအောငျ သုတျပါ။
• သငျ့ခွထေောကျမှာ အနာရှိလား၊ ဘာပွသနာရှိလဲဆိုတာ နစေ့ဉျစဈဆေးပါ။
• အထူးသဖွငျ့ ခွဖေနောငျ့တှလေိုမြိုး ခွောကျတဲ့နရောတှကေို လိုးရှငျး လိမျးပေးပါ။ ခွခြေောငျးတှကွေားကိုတော့ မလိမျးပါနဲ့။ အသားမာတှကေို ရမွေုပျကြောကျလေးနဲ့ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ခြောမှအေ့ောငျ ပှတျပါ။ ကတျကွေး၊ ဓား စတာတှမေသုံးပါနဲ့။
• ခွသေညျးညှပျတဲ့အခါ တညျ့တညျ့သာညှပျပွီး ထောငျ့တှကေို တိုအောငျ မညှပျပဈပါနဲ့။
• သငျ့ဆရာဝနျက ခွထေောကျကနျြးမာရေးကို နစေ့ဉျစဈဆေးပါစေ။
• ဆေးလိပျသောကျပါက ဖွတျပါ။ ဆေးလိပျသောကျခွငျးက သှေးကွောကဉျြးခွငျးနဲ့ ခွထေောကျသှေးလှညျ့ပတျမှု မကောငျးမှနျခွငျးကို ဖွဈနိုငျခွေ ထပျမြားစပေါတယျ။